Huawei Data Clone Transfer Data sy rakitra mankany amin'ny smartphone vaovao 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Efa nividy smartphone vaovao ve ianao ary te-hamindra ny angon-drakitrao rehetra avy amin'ny findainao taloha mankany amin'ilay iray vaovao? Ny vahaolana dia Ny telefaona finday Huawei, fampiharana novolavolain'ny orinasa sinoa malaza, feno, multiplatform ary mifanaraka amin'ny Android sy iPhone.
Ity rindranasa ity dia tena mety ho an'ireo izay mivadika avy amin'ny iPhone mankany amin'ny smartphone Android vaovao ary, ambonin'izany rehetra izany, ho an'ireo izay manova ny findainy Huawei ho marika hafa (nanomboka androany dia azo antoka fa mivarotra latsaky ny fotoana kelikely ireo finday Huawei).
VAKIO IZAO:Famindrana angona avy amin'ny finday Android iray mankany amin'ny iray hafa
Con Ny telefaona finday Huawei Azo atao izany:
mamindra angona avy amin'ny iPhone/iPad smartphone Huawei ary ny mifamadika amin'izany;
mamindra angona avy amin'ny iPhone/iPad smartphone Android ary ny mifamadika amin'izany;
mamindra angona avy amin'ny finday avo lenta Android smartphone Huawei ary ny mifamadika amin'izany;
mamindra data eo anelanelan'ny smartphone Huawei.
File sy data azo afindra
yo tahirin-kevitra izay azo afindra amin'ny alàlan'ny Clone an-telefaona Ireto manaraka ireto:
fifandraisana amin'ny telefaona;
Noho ny antony fiarovana napetraky ny Android misy data izay tsy misy azo afindra:
angona avy amin'ny rindranasa toa ny WhatsApp;
angona ao anaty rahona: ohatra, sary voatahiry ao amin'ny Google Photos;
rafitry ny rafitra.
Ahoana ny fomba famindrana angona amin'ny Phone Clone
1) Voalohany aloha mila mametraka ny fampiharana maimaimpoana ianao Clone an-telefaona amin'ny fitaovana roa. Raha samy finday ny finday avo lenta Huawei ho hitanao ny fampiharana efa napetraka.
2) Raha vao sintonina ny fampiharana dia tokony hosokafana amin'ny fitaovana roa izy io ary kitiho "Manaiky" Ambany ankavanana;
3) Amin'ny fitaovana roa, ny fandraisana ho mpikambana hahafahanao miditra amin'ny angon-drakitrao;
4) Raha vantany vao nanome alalana tamin'ny finday avo lenta ianao dia hisokatra ny fakantsary mangataka anao hamorona a Kaody QRraha ao amin'ny smartphone vaovao ianao dia tsy maintsy misafidy ny karazan-telefaona taloha "Huawei", "Android iray hafa", "iPhome / iPad". Safidio ny marina ary Kaody QR.
5) Miaraka amin'ny finday avo lenta taloha, alaharo ny Kaody QR: manomboka eto dia hanomboka ny andrana fifandraisana eo amin'ireo fitaovana roa ireo, avy eo ny fandraisana ho mpikambana fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fikandrana pop-up.
6) Azonao atao izao ny manondro ny fisie rakitra alefanao amin'ny smartphone taloha "niseho"ireo izay mahaliana anao.
7) Press "Fanamafisana" ary ny fomba fifindra-angona data dia hanomboka ho azy.
Ny famindrana angona dia atao amin'ny alàlan'ny rohy karazana Wifi namorona amin'ity eo anelanelan'ny fitaovana roa: toy izany ny fomba fiarovana mi fifadian-kanina.
Raha manana angon-drakitra marobe ianao, mety maharitra minitra maromaro ny fifindra-monina, saingy mbola hisy famantarana famantarana sisa tavela eo amin'ny efijery. Raha tapaka ny fifandraisana misy eo amin'ny finday avo lenta dia haverina ny fomba fiasa ary hiverina amin'ny toerana nijanonany ny famindrana.
VAKIO IZAO: Mifamadiho amin'ny Android mankany iPhone ary afindra ny angona rehetra